Daawo: Tafatiraha Bbc Afrika Mary Harper oo Sawir ka Bixisay Farqiga u Dhexeeya Somaliland Iyo Soomaaliya – somalilandtoday.com
Daawo: Tafatiraha Bbc Afrika Mary Harper oo Sawir ka Bixisay Farqiga u Dhexeeya Somaliland Iyo Soomaaliya
Hargaysa(SL-)Daawo: Tafatiraha Bbc Afrika Mary Harper oo Sawir ka Bixisay Farqiga u Dhexeeya Somaliland Iyo Soomaaliya
“Somaliland waxaan dareemaa nabadgelyo taam ahi ka jirto, Balse Soomaaliya waxaan ku maraa anigoo wata lix ilaalo ah iyo baabuur gaashaaman”
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo ay wehelinayeen Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta C/naasir Cumar Jaamac iyo Masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta iyo Agaasimaha Ururka Suxufiyiinta Somaliland ee Solja ayaa soo dhaweeyey Mary Harper oo ah suxufiyad caan ah oo ka tirsan BBC-da oo maanta soo Booqatay Wasaaradda Warfaafinta.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Dhaqanka iyo Wacyigelinta Maxamed Muuse Diiriye iyo Masuuliyiinta Wasaaradda ayaa soo kormeeray Waaxyaha ay ka kooban tahay Wasaaraddu, waxaanay warbixin ka dhegaysteenIdaacada Radio Hargaysa, Wakaaladda Wararka iyo Telefishanka qaranka.
Md. Maxamed Muuse Diiriye Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, ayaa sheegay inay weriye Mary Harper ay u soo dhaweeyeen maadaama oo ay tahay suxufiyad xog ogaal u ah Somaliland, waxaanu yidhi”Waxa halkan (Wasaaradda Warfaafinta) noogu timid oo aanu soo dhaweynaynaa Weriye Mary Harper oo ah suxufiyad caan ah oo ka tirsan BBC-da. Waxaannu u soo dhaweynaynaa waa wax ay naga mutaysatay. Waxaan filayaa in wixii ay ku aragtay Somaliland ay u sheegi doonto adduunweynaha oo ay ka hadasho dalka horumarkiisa iyo reer Somaliland dawlad ahaan waxay qabsadeen.”
Mary Harper oo ka hadlaysay booqashada ay ku timid Wasaaradda Warfaafinta Somaliland waxay tidhi “Aad ayaad ugu mahadsan tahay Wasiir sida diiran ee aad iigu soo dhaweysay Hargeysa iyo halkan oo ah Wasaaradda Warfaafinta. Waxaan aad ugu faraxsan nahay inaan halkan ku arkay laba agaasime waaxeed oo dumar ah, taasi oo ah mid lagu diirsado.
Waxaan soo maray Idaacadda, Telefishanka, Wakaaladda Wararka iyo qaybaha kala duwan ee wasaaradda Wafaafinta.waxaan dareemayey inaan joogo gurigaygii oo kale.”
Mary Harper oo la weydiiyey waxay dareento marka ay timaado JSL. Waxaanay tidhi “Waxaan dareemaa markaan imaado Somaliland inay ka badbaado badan tahay deegaannada kale ee mandaqada. Sidoo kale waxaan dareemaa Itoobiya inay iyana tahay meel nabadgelyo ah. Soomaaliya oo kale waxaan dareemaa inaanay ahayn meel nabadgelyo ahayn.
Somaliland waxaan dareemaa nabadgelyo taam ahi ka jirto oo aan lugayn karo jidadka iyo shaaricyada magaalada anigoo sita boorsadayda oo aanay ciddi taabaynin. Balse Soomaaliya waxaan ku maraa anigoo wata lix ilaalo ah iyo baabuur gaashaaman waxaana aad la daris tahay qarax. Laakiin Somaliland waxaad maqlaysaa muusig iyo samxada Baabuurta waxaanad dareemaysaa nabadgeylo buuxda.”
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha dalwad-deegaanka Soomaalida Itoobiya...